Halkay marayaan wadahadallada Farmaajo iyo Rooble? | KEYDMEDIA ONLINE
Halkay marayaan wadahadallada Farmaajo iyo Rooble?
Xaaladaha ku xeeran hoggaanka NISA, ayaa la filayaa in ilaa caawa xal laga gaaro, isku soo dhawaansho labada dharaf ah ayaana laga dareemayaa wadahadallada xalay ka billowday Madaxtooyada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xalay yeeshay kulankoodii ugu horreeyay tan iyo bishii hore, kadib dadaallo uu labdii habeen ee na-weydaartay waday Madaxweynaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen.
Kulanka xalay oo ku dhamaaday si xasilloon, ayaa horseeday in la sii wado wadahadallada lagu xallinayo khilafka siyaasadeed ee ka dhasay kiiska Ikraan Tahliil, kaas oo si weyn u saameeyay hay’adaha Amniga oo NISA, ugu horreyso.
Maanta, markii ugu horreysay, waxaa kulan wada yeeshay Wasiirka Amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur, iyo Farmaajo, oo si weyn uga kala aragti gadisan xaaladaha siyaasadeed ee dalka, waxaana sidoo kale, kulankaas qeyb ka ahaa Agaasimaha KMG ee NISA Bashiir Goobe.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dhawaan ku biiray kulanka maanta duhurkii u soo billowday Farmaajo, Wasiirka amniga iyo Agaasimaha Nisa, waxaana goobjoog ah Madaxweynaha Koofur galbeed Laftagareen.
Sida ay sheegayaan warar lagu kolsoonaan karo, Farmaajo, ayaa doonaya in Agaasime la isla ogolyahay loo magaacabo hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, ilo xog-ogaal ah ayaana sheegaya in Yaasiin Farey oo Farmaajo qaab fowdo ugu magacaabay gaasimaha NISA uu isna kulanka qeyb ka yahay.
Wararka arrinkaan la xariira kala soco bogga wararka Keydmedia Online.